DAAWO:Madaxweynaha JSL oo maanta ka qaybgalay furitaanka Ceel biyood oo laga hirgeliyey deegaanka Wado-makaahil + SAWIRO. |
DAAWO:Madaxweynaha JSL oo maanta ka qaybgalay furitaanka Ceel biyood oo laga hirgeliyey deegaanka Wado-makaahil + SAWIRO.
Madaxweynaha Jamhuuriyada Somaliland Mudane Axmed Maxamed Silaanyo waxa uu maanta ka qaybgalay furitaanka Ceel biyood oo laga hirgeliyey Wado-makaahil horena uu u dhagax dhigay madaxweynuhu ceelkaasi.
Madaxweynaha oo saaka ka socdaalay caasimada Somaliland ee Hargeysa ayaa gaadhay wado-makaail oo ka tirsan Degmada fara-weyne, madaxweynuhu markii u gaadhay goobtaasi waxa uu ugu horayn soo dhawayn balaadhan kala kulmay shacbiga ku dhaqan wado-makaahil oo ay hormuud ka ahaayeen Ugaaska, Sulaadiinta Cuqaasha, iyo Culimo aw-diinka deegaanka, waxaanu madaxweynuhu u gudbay goobta laga qoday ceel biyoodka oo uu xadhiga ka jaray ceelkaasi.
Abwaan Maxamed Maxamuud Dhega-cun oo isna hadalkiisa ku bilaabay runtii hadii aanu reer Wado-makaahil nahay madaxweyne aanu la kulano oo aanu soo horfadhiisano waa noo kow adiga ayaa ugu horeeya, madaxweyne aanu la tashano oo aanu dantayada u bandhigana adiga au horeeya, madaxweyne wax noo qabtana adigaa u horeeya, ayuu yidhi abwaanku isaga oo ka dibna gabay u tiriyey Madaxweynaha ay midhihiisa ka mid yihiin Haybadlow madaxweyne marlabaad na hogaami..